Grace Mugabe Articles - Breitbart
20 Feb 2018, 3:29 PM PDT
27 Nov 2017, 3:41 PM PDT
Dictator Robert Mugabe sent a letter of resignation to the Zimbabwean parliament on Tuesday, ending four decades of tyrannical misrule and concluding a delicate coup launched against him by military commanders last week.
21 Nov 2017, 8:27 AM PDT
Mugabe Makes First Appearance Since Zimbabwe Coup, Falls Asleep
93-year-old Zimbabwean dictator Robert Mugabe made his first public appearance since the coup that kinda-sorta deposed him this week, attending a university graduation ceremony on Friday during which he apparently fell asleep.
17 Nov 2017, 3:34 PM PDT
The fate of Robert Mugabe remained in doubt on Thursday, as he reportedly negotiated with the Zimbabwean military to either retain power or receive safe passage out of the country into exile.
16 Nov 2017, 3:03 PM PDT
14 Nov 2017, 10:02 PM PDT
Contents: Christian pastor leads ‘#ThisFlag’ demonstrations against Robert Mugabe in Zimbabwe; Zimbabwe war veterans suddenly turn on Robert Mugabe
23 Jul 2016, 6:29 AM PDT